Iwo multifunctional dumpling muchina chinhu chinoraswa dumpling muchina
Multifunctional dumpling muchina imwe-nguva inogadzira dumpling muchina ! Dumplings chikafu chinodikanwa chevanhu vekuchamhembe. Ivo vanogara vasingapatsanurwe kubva kune madomasi panguva yemitambo yeGore Idzva uye kugashira hama neshamwari. Kunyanya pazuva rekutanga regore idzva, mhuri inodya dumplings pamwechete. Zvinogona kuoneka kuti madomasi ane chinzvimbo chakakwirira kwazvo mumoyo yedu.
Iyo yekuvandudza nhoroondo ye dumplings yakareba kwazvo. Kwezviuru zvemakore, madhiramu ndeimwe yezvikafu vanhu vanofarira zvakanyanya. Parizvino, hapana munhu anozonzwa kushamisa kune dumplings. Zvino sezvo mazuva ave akanaka, kudya madomasi rave basa rakajairika. Haufanire kudya madomasi panguva yeMutambo weChirimo. Maindasitiri mazhinji ekudyira akagadzira nzvimbo yekudyira marara ine madomasi semusoro wenyaya yavo. Nenzira iyi, madomasi ari kwese kwese. Nenzira iyi, kune vashandi vakawandisa vari kugadzira madomasi. Nekuvandudzika kwenzanga uye kusimudzira kwehupfumi, Iwo mubairo wevashandi wakawedzerawo nekuwedzera kwemitengo, izvo zvinounza mimwe mhedzisiro yakaipa kune yekurasa marara.
Iyo 900t tafura yekurasa dumpling muchina wakagadzirwa nesainzi uye tekinoroji vashandi veJiangbei Fuxin chikafu michini mushini wakanyanya kuve munhu wekugadzira dumplings. Muchina uyu une chaiyo chaiyo pani yekudzora uye iri nyore mukushanda nekugadzirisa. Iyo inogadzirwa neinosvitswa yepamusoro simbi isina simbi, iyo inogona kushandiswa kwenguva yakareba, uye chimiro zvakare chiri chepamusoro-giredhi.
Hukuru, huremu uye huwandu hweganda uye kuputira madhiraini anogadzirwa nemuchina wedumpling anogona kugadziridzwa pamadiro, izvo zvinodzivirira zvachose mamiriro akashata sekudonha uye kutsemuka. Iwo madhiramu akagadzirwa anowedzera kusimba, kuravira, gluten uye moyo murefu, uye ane zvimwe zvakwakanakira zvichienzaniswa nemadhiramu anogadzirwa nemaoko.
Muchina uyu unogona zvakare kugadzira zvigadzirwa zvehukuru hwakasiyana. Iyo mamiriro ndeyekuti wonton, potstickers, lace dumplings, Sifang dumplings, nezvimwe zvinogona kugadzirwa nekushandura iyo mold. Muchina uyu unogona kuumbwa panguva imwe chete kana uchigadzira madomasi, ayo anogona nani kuvandudza kukosha kwehutano hwemadhamu, kuwedzera hupenyu hwesherufu uye kudzivirira kukanganisa, Iwo muchina wakanaka unobatsira vatengi kuita mari yakawanda.
Post nguva: Sep-30-2021
Address: Xiashan musha, hongtang mumugwagwa, jiangbei district, ningbo guta, zhejiang mudunhu (indasitiri nzvimbo A)
Pan-Fried Steamed stuffed Bun Machine , Automatic Steamed stuffed Bun Machine , stuffed Steamed Bun Machine , Household Steamed stuffed Bun Machine , Steamed stuffed Bun Machine , Steamed stuffed Bun Kuita Machine , Products All